Dalalkan deriska ah ee dhaca koonfurta Asia ayaa taariikh u leh in ay soo kala eryaan diblumaasiyiin iyagoo ku eedeynaya basaasnimo.
NEW DEHLI, India – Hindiya ayaa xaqiijisay in ay dalkeeda ka eriday laba mas'uul oo ka tirsanaa safaaradda Pakistan ee New Dehli, talaabadaas oo labadda dal ee ku hubeysan Nuk-liyeerka ka dhex-qarxisay xiisad cusub.
Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda New Dehli ayaa ku eedeysay shaqaalahaas in ciidamadda ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen "iyagoo faraha kula jiro howlo basaasnimo ah".
Dhigeeda Islamabad oo eedeyntaas ku sifeysay "been abuur aan sal iyo baar lahayn" ayaa sheegtay in ay cambaareyneyso, waxayna su'aallo ka waydiistay ergayga India u jooga waddankaas.
Mas'uuliyiinta la ceyriyay ayaa laga talaabiyey xuduudka Wagah, sidda uu sheegay afhayeen u hadlay safaaradda Pakistan. Magacyadooda looma soo bandhigin saxaafada "si loo ilaaliyo sumcadooda"
Wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa war qoraal ah ku shaacisay in wakiiladeeda u jooga Hindiya ay wajahayaan jirdil, cagajugleyn iyo cadaadis diblumaasiyadeed "oo aysan aqbali karin".
Dalalkan deriska ah ee dhaca koonfurta Asia ayaa taariikh u leh in ay soo kala eryaan diblumaasiyiin iyagoo ku eedeynaya basaasnimo. Muran raagay oo ku saabsan maamulida Kashmir wuu dhexyaalaa.
Dagaalo lagu eedeeyay in ay hurinayaan isla markaana u dhaxeeya maleeyshiyaad labada dhinac kala taabacsan oo gobolkaas ku dhexmaray ayaa galaaftay nolosha kumanaan shacab ah. 500,000 ciidanna way joogaan.
Taliyihii Ciidanka Taraafikada Soomaaliya oo geeriyooday
Soomaliya 09.11.2017. 11:02
Soomaaliya: Xildhibaan heer Federaal ah oo geeriyooday
Soomaliya 18.10.2017. 14:51